Toyota Porte 2013 (#601237) ကို Bahan မြို့နယ်တွင်ရောင်းရ... | CarsDB
6571 total views,2today
Lot Number: #601237
(mini alphard )1300CC , POWER SLIDE DOOR , SMART KEY , PUSH START ENGINE , ORIGINAL ALLOY WHEEL , MICHELLIN 2017 NEW TYRES ....
ECO MODE , ၂၀၁၃ ရုပ်ပြောင်း ၊ ခေါင်မြင့် ၊ အတွင်းခန်းကျယ် ၊ ECO MODE / SMART STOP / LOW MILEAGE / TV / BACK CAMERA / SIGNAL LIGHT / FOG LIGHT / HIGH ROOF / WIDE INTERIOR DESIGN / LOW FUEL CONSUMPTION / DVD/MP4 /HDD / MP3 PLAYER SUPER AUDIO WOOFER SOUND SYSTEM .
BGO LICENSE / NEW CAR .
ကား ကို ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင် တွင် လာရောက်ကြည့်ရှု့ ပါရန်။
PRICE : 226 L ( ဈေး ညှိနိူင်း ပါ )
CONTACT : 4320 8588 / 4211 509 38
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Soe Kevin မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Porte 2013 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။